Politika Fiarovana fiainan'olona - Ne gerekir?
Ny adiresy tranonkalantsika dia: https://negerekir.com.
Rehefa mametraka fanehoan-kevitra ao amin'ilay tranonkala ny mpitsidika dia manangona ny angon-drakitra aseho amin'ny endrika fanehoan-kevitra izahay, ary koa ny adiresy IP an'ny mpitsidika sy ny lahatsoratra an-tserasera hanampiana ny fahitana spam.
Tady tsy fantatra anarana (antsoina koa hoe hash) namboarina avy amin'ny adiresy mailaka azonao omena ny serivisy Gravatar hahitana raha mampiasa azy ianao. Hita eto ny politika momba ny tsiambaratelo momba ny serivisy Gravatar: https://automattic.com/privacy/. Rehefa nankatoavina ny hevitrao dia ho hitan'ny olona rehetra ny sarinao momba ny mombamomba anao.
Raha mampakatra sary ao amin'ny tranokala ianao dia tokony hisoroka ny fampidiranao sary miaraka amina data-data napetraka (EXIF GPS). Ny mpitsidika tranokala dia afaka misintona sy manaisotra ny mombamomba ny toerana rehetra avy amin'ny sary ao amin'ilay tranonkala.
Raha mamela hevitra ao amin'ny tranokalanay ianao, dia azonao atao ny misafidy ny hitahiry ny anaranao, ny adiresy mailaka ary ny tranokalanao amin'ny cookies. Natao hahasoa anao ireo, noho izany dia tsy mila mameno ny mombamomba anao intsony ianao rehefa mamela hevitra hafa. Haharitra herintaona ireto cookies ireto.
Raha mitsidika ny pejin-tranonay ianao dia hametraka cookie tsy maharitra izahay hamaritana raha manaiky cookies ny browser-nao. Ity cookie ity dia tsy misy angona manokana ary voafafa rehefa manidy ny tranokalanao ianao.
Rehefa miditra ianao dia hametraka cookies vitsivitsy ihany koa izahay hamonjenay ny fampahalalana momba ny fidiranao sy ny safidinao aseho ny efijery. Mandritra ny roa andro dia moka ny cookies, ny cookies amin'ny safidy safidinina dia maharitra herintaona. Raha misafidy ny fampiasa "Remember Me" ianao dia hitohy mandritra ny tapa-bolana ny fampidiranao. Raha mivoaka ao amin'ny kaontinao ianao, dia hesorina ny cookies.
Votoatiny tafiditra ao anaty tranonkala hafa
Ny lahatsoratra ato amin'ity tranonkala ity dia mety misy atiny voafantina (oh: horonan-tsary, sary, lahatsoratra sns). Ny atiny voafintina avy amin'ny tranokala hafa dia mitondra tena mitovy amin'ny an'ny mpitsidika ny tranokala hafa.
Ireo tranonkala ireo dia mety manangona angon-drakitra momba anao, mampiasa cookies, manao fanarahan-dia amin'ny antoko fahatelo fanampiny, ary manara-maso ny fifandraisanao amin'ity atiny tafiditra ity, ao anatin'izany ny fanarahana ny fifandraisanao amin'ny atiny tafiditra, raha manana kaonty ianao ary tafiditra ao amin'io tranonkala io.
Amin'iza no izarantsika ny angon-drakitrao?
Raha mangataka famerenana ny teny miafina ianao dia ho tafiditra ao amin'ny mailaka famerenana ny adiresy IP anao.
Mandra-pahoviana no tazominay ny angon-drakitrao?
Raha mamela hevitra ianao dia tehirizina mandritra ny fotoana tsy voafetra ny hevitra sy ny metadata anao. Izany dia mba hahafahantsika mamantatra sy mankato ny fanamarihana manaraka fa tsy hitazona azy ireo amin'ny filaharana antonony.
Ho an'ireo mpampiasa misoratra anarana ao amin'ny tranonkalantsika (raha misy), dia tahirizinay ihany koa ny mombamomba azy ireo omeny ao amin'ny mombamomba azy ireo. Ny mpampiasa rehetra dia afaka mijery, manova na mamafa ny mombamomba azy ireo amin'ny fotoana rehetra (afa-tsy ny hoe tsy afaka manova ny anarany) izy ireo. Afaka mijery sy manitsy ity fampahalalana ity koa ireo mpitantana tranokala.
Inona no zonao mihoatra ny angon-drakitrao?
Raha manana kaonty ianao na nametraka hevitra tao amin'ity tranokala ity, dia azonao atao ny mangataka ny handray antontan-taratasy aondrana ny angon-drakitra momba anao manokana izay tazoninay momba anao, ao anatin'izany ny angon-drakitra nomenao anay. Azonao atao ihany koa ny mangataka ny hamafanay ny angona manokana momba anao. Tsy tafiditra ao anatin'izany ny angon-drakitra izay adidintsika tazomina ho an'ny fitantanan-draharaha, ara-dalàna na fiarovana. Ho an'ny fangatahana fifandraisana tsidiho ny pejinay.
Aiza no andefasanay ny angon-drakitrao?
Ny valin'ny mpitsidika dia azo zahana amin'ny alàlan'ny serivisy fitadiavana spam mandeha ho azy.